Warqado Sir ah: Ethiopia oo lagu Wareejiyay Deked SOMALIA muhiim u ah. | shumis.net
Home » News » Warqado Sir ah: Ethiopia oo lagu Wareejiyay Deked SOMALIA muhiim u ah.
Warqado Sir ah: Ethiopia oo lagu Wareejiyay Deked SOMALIA muhiim u ah.
Dokumenti sir ah oo aan helnay ayaa waxaa ku cad in Dekedda Berbera gebi ahaanba lagu wareejiyay dowladda Itoobiya. Waxaa dokumentiga ku cad in qarashka ku baxayo dhismaha dekedan oo ah $1.8 Billion oo Dollar ayaa waxaa iska kaashanaya bixintiisa, Bankiga Adduunka, Bankiga horumarinta Africa, Bangiga horumarinta Islaamka, Qaramda Midoobay iyo Ururka EU.
Waxaa dhaqaalaha ku baxaya dhisidda dekedda Berbera kafiil ka ah urur goboleedka IGAD, iyadoo deynta lacagta lagu dhisayana aay tahay mid dusha ka saaran dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Anfaca ugu weyn ee dekeddan ayaa leh Itoobiya oo aan wax canshuur ah ka bixin doonin alaabada uga soo dega Berbera, waxaa intaa dheer in Shaqaalaha Dekedda Berbera 75% aay noqon doonaan shaqaale ka socda Wasaaradda Kalluumeysiga iyo dekedaha ee Dowladda Itoobiya sida ku cad heshiiska aay dhawaan magaalada Abu Dhabi ku kala saxiixdeen RW Itoobiya Haile Maryama iyo Madaxweynaha JFS Xasan Sheekh Maxamuud.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa dhawaanahanba waxaa aay is weydiinayeen waxa ku dhacay qaranimadii Soomaaliyeed, iyadoo hadda aay maalinba maalinta ka danbeyso aay soo baxeyso in gebi ahaanba geygii Soomaaliyeed uu gacanta u galay oo laga xukumo Addis Ababa.
Waxaa kale oo jira in heshiis kale oo aan weli la shaacin lagu dhisi doono dekedda Kismaayo, isla markaana la sameyn doono waddo tareen oo isku xireysa Kismaayo iyo Itoobiya, si alaabaha uga soo dega Kismaayo xukuumadda Addis Ababa aay maalin guduheed ku tagto dalka Itoobiya.
Halkaan Riix oo arrag Caddeynta
Title: Warqado Sir ah: Ethiopia oo lagu Wareejiyay Deked SOMALIA muhiim u ah.